5 Mahara Kunyorera kana Kutengeswa kweiyo Yakatemwa Nguva (Ndira 7) | IPhone nhau
Mugovera Mugovera ...! Uye munhu wese anoenderera achiti chirevo nenziyo yaanoda zvakanyanya nekuti parizvino ndatora imwe nzira kuburikidza neApp Store uye ndawana imwe yakanaka ruoko mitambo uye maapp yeavo vanobhadharwa asi kuti isu tinogona ikozvino kuwana mahara kana zvirinani nekutapira kwakanaka. Kana vaMagi vakaita misikanzwa newe, nhasi unogona kuzviitira zvishoma nekutora mukana weizvi zvinopihwa.
Hutano, kutora mifananidzo, dzidzo, mari ... Zvisinei, pane zvishoma zvese, asi izvo iwe zvausingafanire kukanganwa ndezve izvo yakatemwa nguva inopa uye kuti ini ndinogona kungovimbisa kuti ivo varipo panguva yekuburitsa ichi posvo. Hatizive pavanopera, nekuti ivo vanogadzira havazvizivise uye ini ndichiri ndisina masimba, saka, kana iwe uchifarira kupihwa, chibate! Gare gare, kana zvisiri izvo zvawanga uchitarisira, unogona kuzvidzorera kuApp Store uye wotora mari yako, kana iwe wakabhadhara chimwe chinhu nezvayo.
1 Aftercut: Yekumashure Eraser & Nyore Photo Edhiyo
4 Mhepo Radio Tune
Aftercut: Yekumashure Eraser & Nyore Photo Edhiyo
Ini ndanga ndisingazive nezve kuvapo kweapp iyi asi nekukurumidza pandakaiona yemahara ndakavhura kuti ndiitore, kunyanya nekuti inogona kubatsira zvakanyanya panguva dzandinoshanda kubva kuPadad, uye saka ndinogona kugadzira imwe montage yemifananidzo, imwe yeaya akanyanya tacky 😅.
Mushure meCut ndiyo "nzira iri nyore yekucheka nekunyora mifananidzo"; Neichi chishandiso tichakwanisa kusarudza nekutora zvinhu kubva kumifananidzo yedu nekuda kwemanyorero kana "akangwara" sarudzo, chinja kumashure uye wedzera zvinopfuura makumi mana mafirita uye zvinopfuura mazana matatu mhedzisiro mumasekondi mashoma: mumvuri, kuratidza, chikamu, girazi, penzura, blur, comic, mosaic uye zvimwe zvakawanda ..
Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kupinza uye kutumira kunze mifananidzo mune yakajeka PNG fomati.
Aftercut: Yekumashure Eraser & Nyore Photo Edhiyo Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store asi kana ukamhanyisa unogona kuiwana zana muzana pasina.
Kufara Ndicho kamera ye iPhone yako iyo inosunda iwe kuratidza kwako kwese kugona.
Tora mapikicha seakanaka sehupenyu uye uve chikamu chenharaunda yakasikwa kwazvo pasirese, chete pa iPhone.
Kufara Iyo ine yakazara nhevedzano yemamodhi, maficha uye mabasa anoita kuti ive yakasarudzika application:
ClassicMode- Inokutendera iwe kupfura yechinyakare-yechikoro dhizaini ine yakanyatso kushandurwa makamera iwe aunogona switch lens, kupenya, uye swipe kutora firimu.
ProMode- Tora zvakanyanya pamusoro pekamera nekugadzirisa kutarisisa, chena chiyero, kuburitsa, shutter kumhanya, ISO uye chiyero chechimiro neinongedzo chaiyo.
Yakasviba Suite- Iyo yakazara edhisheni suite inosanganisira 20+ nyanzvi yekukwatura maturusi uye gumi nemaviri akaumbwa maumbirwo.
HipstaMart Shop- Bhurawuza kuburikidza anoshamisa mafirita mapakeji akagadzirwa neanotungamira epasirese ekugadzira mafoto, anowanikwa mukutenga-mu-app
DhindaLab: gamuchira zvimiro zvemuviri zvakananga pasuo rako; isu tinotakura kune dzinopfuura mazana maviri nyika.
Kufara Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana ine 33% dhisikaundi kune ma1,99 euros chete.
Hipstamatic Classic3,49 €
Ndicho kusarudzwa kwemanzwi uye mimhanzi inozorodza izvo zvinokubatsira kuti ubvise kubva pasirese uye uve nehunhu hwakanaka hwekurara nehupenyu.
Music Healing 3 Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara.
Music Healing 31,09 €
Mhepo Radio Tune
Ichi chishandiso chinoda tsananguro shoma. teerera nhepfenyuro dzinodarika zviuru makumi matatu kubva pasirese nepasi rose kuburikidza ne iPhone yako, iPad kana iPod touch. Unogona kusarudza nhepfenyuro dzaunofarira, gadzira zvinyorwa zvekutamba uye zvimwe zvakawanda. Ehezve, iwe unozofanirwa kuve unobatana neinternet.
Mhepo Radio Tune Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara.
An app yekudzidzisa iyo ichakubatsira iwe ziva system yacho yegar nenzira isingatendeseki: mapuraneti, nyeredzi, kutenderera uye zvese zvaunogona kufungidzira nezve rezuva, ikozvino muchanza cheruoko rwako ..
Universe simulator Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana zvachose yemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 5 Mapurogiramu emahara kana ari kutengeswa kwenguva shoma (Ndira 7)
Cuttlefish inoshandisa icon yemavara mu3D mamenyu